Faahfaahinta xorriyadda mashruuca ee Ciyaaraha Epic sida ku cad Apple: Maaha in wax walba ay u eg yihiin | Waxaan ka socdaa mac
Bartamihii sanadkii hore, bishii Ogosto, Apple wuxuu go'aansaday inuu dhinac iska dhigo ciyaarta Fortnite iyo inaan dib dambe loogala soo bixi karin App Store. Waqtigaas, waxay umuuqatay in shirkadda ku taal xayndaabka ay siineyso Epic Games cashar ku saabsan awoodda. Si kastaba ha noqotee, markii waqtigu ka soo wareegay, xeelado cusub ayaa la arkay oo taas xaqiijinaya Apple midkoodna ma ahayn mid xun ama Epic Games oo waxyeello gaarsiisay wali abuuraya xoriyadiisa mashruuc. Labaduba waxay ciyaarayaan dhuumasho-raadis, laakiin midkood ayaa ku qasbanaan doona inuu "xidho".
1 Ciyaaraha Epic-ka waxay ka cawdeen kaligiis gacanta Apple. Mashruuca Xorriyadda ayaa la abuuray.
2 Maaha sida loo tiriyo. Sida laga soo xigtay Apple, mashruuca xorriyadda waxaa loo abuuray maxaa yeelay Fortnite horeyba wuxuu ugu jiray saacado hoose
Ciyaaraha Epic-ka waxay ka cawdeen kaligiis gacanta Apple. Mashruuca Xorriyadda ayaa la abuuray.
Laga soo bilaabo Dukaanka App ka hor intaadan ciyaarin Fortnite. Kadib dagaalkii dhexmaray Epic Games iyo Apple, kan dambe wuxuu go'aansaday inuu ciyaarta ka saaro bakhaarka appka uuna ciqaabo shirkadda ciyaarta guuldarro. awooddeeda horumarineed. Muranka ayaa sii soconaya inkasta oo qayb ka mid ah la xaliyay, Isticmaalayaasha Apple ma ciyaari karaan Fortnite toos ah.
Agaasimayaasha Epic Games waxay ilaaliyeen ku dhawaaqidii ahayd in Apple ay kaligeed shaqeyso (waxay kubiirtay gaariga ama tareenka durba ku faafayay macnahaas) iyo in gudiyada ay dacweysay ay ahaayeen kuwo xadgudub ah. Shirkadda uu hoggaamiyo Tim Cook ayaa isdifaacday mar labaad iyo mar labaad iyadoo sheegtay in aysan jimicsiga noocaas ah sameynin, maaddaama ciyaartaas sida kuwa kale oo badan lagu heli karo habab kale iyo in Apple uusan ahayn kii ugu horreeyay ee biil lagu sameeyo ciyaaraha fiidiyowga. Laakiin sidoo kale waa inuu iska difaacay eedeymaha lagu soo oogay guddiyada isagoo caddeeyay in isla khidmaddaas la soo oogay tan iyo bilowgii (2008) iyo qof walba waxaa loo heystaa si siman, yar ama weyn.
Apple lahayn lahaansho ama awood suuq suuqa waxsoosaarka ee khuseeya macaamilada arjiga ciyaarta. Mana la sheegan karo inay leedahay awoodaas markii xayiraadaha la saaray la saaray inta lagu gudajiray bilaabida App Store.
Kuwa Apple uma muuqan kuwo aad ugu qanacsan dooddooda iyo adeegsadayaasha Fortnite ayaa si isa soo taraysa loogu meeleeyay dhinaca cayaartooda. Ku dhiirrigeliyay Ciyaaraha Epic kuwaas oo abuurayay dhacdooyin gaar ah oo ciyaarta ah oo lagu taageerayo dacwaddooda ka dhanka ah Apple. Gaar ahaan markay soo ifbaxday in Ciyaaraha Epic ay go'aansadeen in nidaamkan loo rogo a ku dhawaaqida ujeedka ka dhanka ah "shirkadaha kaligood haysta" wicitaanka Mashruuca Xorriyadda.
Maaha sida loo tiriyo. Sida laga soo xigtay Apple, mashruuca xorriyadda waxaa loo abuuray maxaa yeelay Fortnite horeyba wuxuu ugu jiray saacado hoose
Apple waxay ku doodeysaa diiwaankeeda sharciyeed in App Store uu abuuray fursado cusub oo aan horay u jirin. Shirkadda ayaa sheegtay in App Store uu muhiimad weyn u yeeshay dhaqaalaha maaddaama ganacsiga barnaamijku uu malaayiin doollar adduunka oo dhan u dhaqaajinayo. Waxay sheegaysaa in "inta badan codsiyada ay xor u yihiin soo dejinta," taas oo macnaheedu yahay shirkaddu wax shaqo ah kama kasbato iyaga.
Sida laga soo xigtay Apple, Ciyaaraha Epic waxay shaqaaleeyeen shirkadaha xiriirka dadweynaha horeyba 2019 in laga shaqeeyo istiraatiijiyad warbaahineed oo loo yaqaan "Maktabadda Mashruuca" oo loogu talagalay in lagu muujiyo Apple "inuu yahay ninka xun." Shirkadda ciyaarta fiidiyowga waxay shaqaalaysiisay Cravath, Swaine & Moore LLP iyo shirkad xiriir la leh dadweynaha sannadkaas, dacwadduna waa dhammaadka dadaalkaas. Waxay sidaa u yeeleysaa maxaa yeelay, sida laga soo xigtay Apple, Mashruuca Xorriyadda wuxuu bilaabmay markii ay arkeen hoos u dhac ku yimid dakhligooda iyo isticmaalayaasha bil kasta shaqeeya. Qaabkaas ayay ku abuureen istiraatiijiyad lagu bixiyo guddiyo yar.
Dhamaan waxyaabaha aan soo sheegnay ka sokow, Apple waxay sheeganeysaa inaysan jirin kaligood-talin noocaas ah maxaa yeelay Epic wuxuu lahaa in kabadan $ 700 milyan oo dakhli ah ee macaamiisha macruufka ee leh Fortnite markii ciyaarta laga heli karayay App Store. Shirkaddu sidoo kale waxay bixisaa guddiyada barnaamijyada kale ee Fortnite loogu qaybiyo.
Imtixaannada ay hadda soo bandhigtay Apple waxay lahaan doonaan kuwo sii socda soo socota May 3 marka maxkamadu bilaabato taas oo la filayo in wakiilada ugu weyn ee labada shirkadood shaqsi ahaan ugu tag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Faahfaahinta mashruuca xorriyadda ee Ciyaaraha Epic sida laga soo xigtay Apple: Wax walba maahan sida ay u muuqato
Dukaan cusub oo Apple ah ayaa laga yaabaa inuu albaabadiisa ka furo magaalada Berlin